Keypad vy manjelanjelatra natsofoka tao amin'ny Masininy Vending Machine-News-Yuyao Xianglong Communication Industrial Co., Ltd.
Keypad vy manjelanjelatra natsofoka tao amin'ny Masinina Vending Mask
Fotoana: 2020-05-19 Hits: 36
Razer, mpanamboatra fitaovana Razer, dia mikendry ny hanome saron-tava tarehy maimaimpoana an-tapitrisany maro any Singapour satria miady amina firongatry ny trangana virus coronavirus ny firenena.
Ny orinasan-teknolojia, izay manana foibe any Singapore sy Etazonia, dia efa nitaona ny fanaovana sarontava ho valin'ny areti-mandringana. Ankehitriny dia mikasa ny hampitomboina avo roa heny izany famokarana izany izy, ary koa ny fananganana milina fivarotana azy manokana.
Ny fampitomboana ny famokarana dia ny "fiantohana ny famerenana amin'ny laoniny" any Singapore, hoy ilay orinasa.
Ireo milina fivarotana vaovao dia mikendry ny "hiantohana fa ny fidiran'ny besinimaro ny maska ​​foana rehefa mivoaka sy manodidina izy", ohatra, raha misy manadino hitondra iray avy ao an-trano, hoy ny orinasa.
Manomboka mipoitra manodidina an'i Azia ny masinina mpivarotra sarontava tarehy satria ny mpamatsy mitady fomba tsotra hanatonana mivantana ny besinimaro. Tamin'ny volana lasa teo, nilaza ny hanangona sarontava maimaimpoana ho an'ny olona amin'ny tanàna amin'ny alàlan'ny toeram-pivarotana milina varotra ny mpamongady zavakanto malaza any Hong Kong.
Ny indostrian'ny serasera XiangLong dia manolotra karazana kalitao avo lenta, tsy tantera-drano ary fanoherana keypad milina fivarotanas. Ny keypad rehetra dia vita amin'ny mateza Stainless vy or zinc alloy. Ny haavon'ny bokotra, ny layout ary ny lamina dia azo alamina mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa.
Taloha: Keypad vy vy tsy misy fangarony 4x4 napetraka ao amin'ny milina fivarotan'i Uniqlo
Next: Inona no ho avin'ny indostrian'ny ATM?